कांग्रेसमा कोइराला परिवारको सक्रियता, देउवालाई पर्ने भो आपत || सुनौलो नेपाल
कांग्रेसमा कोइराला परिवारको सक्रियता, देउवालाई पर्ने भो आपत
कांग्रेस र कोइराला परिवार परिपूरकजस्तै थियो सुशील कोइराला सभापति छँदासम्म। १३ औं महाधिवेशनको संघारमा सुशीलको निधन भएपछि कोइराला परिवार मूल नेतृत्वबाट बाहिरियो। उनीहरूले तत्कालीन कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेललाई सभापतिमा समर्थन गरेका थिए। पौडेल समूहबाट महामन्त्रीमा डा. शशांक कोइराला निर्वाचित भए। डा. शेखर कोइराला र सुजाता कोइराला केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दौनिकमा प्रकाशित छ ।
शनि, साउन ४, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस